Myanmar famous actor, Nay Toe and famous actress, Eaindra Kyaw Zin's Couple Fashion Photos | Myanmar Celebrity Couple Photos
Myanmar famous actor, Nay Toe and famous actress, Eaindra Kyaw Zin's Couple Fashion Photos
These are romantic couple fashion photos of Myanmar famous actor, Nay Toe and Myanmar famous actress, Eaindra Kyaw Zin.
မြန်မာ နာမည်ကျော် မင်းသား နေတိုး နှင့် နာမည်ကျော် မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ရဲ့ လှပပြီး စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ စုံတွဲပုံလေးတွေပါ။
အိန္ဒြာကျော်ဇင် က နာမည်ကျော် မင်းသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ၊ မော်ဒယ်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်လေး အောင်မြင်မှု နှင့် ပရိတ်သတ်ရဲ့ လက်ခံမှုကို ရရှိတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ပါ။ မြန်မာမင်းသမီး တွေထဲမှာ စွဲဆောင်မှု အရှိဆုံး နှင့် ထူးခြားတဲ့ ညို့ဓာတ်ရှိ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုထိ တစ်ကိုယ်တည်း အပျိုကြီး လုပ်နေတုန်းပါဘဲ။ မင်းသား နေတိုးက တော့ အခုတလောမှာ တဟုန်တိုး ကျော်ကြားလာတဲ့ ရခိုင်သား မင်းသားတစ်လတ်ပါ။
babyMay 8, 2009 at 1:37 PMEaindra Kyaw Zin လေ တခါမှမအိုနိင်ဘူးနော်ဘာတွေနဲထိမ်းထားလဲမသိဘူးဗျာကျနော် အကြိုက်ဆုံးမင်းသမီးတွေထဲမှာ သူပဲ..ဘယ်သူမှ သူ့ ကို လိုက်မမှီဘူးနော် .......ကောင်းပါတယ် .......သူကိုပြောလိုက်ပါ.........“ထောင်ထဲမြန်မြန်ဝင်လိုက်ပါတော ” လို့ အိမ်ထောင်ကိုပြောတာနော်.....ဟယ်ဟယ်ဟယ်ReplyDeleterainMay 31, 2009 at 7:21 PMHey! Nay Toe, I think you are have very best style in Myanmar. In movie star you and Endra Kyaw Zin is very perfect and look beautiful.Endra Kyaw Zin is still single and what about you do you still be single. thank you very much Nay Toe and Endra Kywa Zin.ReplyDeleterainMay 31, 2009 at 7:25 PMhey nay toe email me back o.k i am your audience. if you want to email me please live your comment under your pictur o.kReplyDeleteAnonymousAugust 15, 2009 at 11:10 PMမမကို သားသားလည်းချစ်ပါတယ်...ReplyDeleteAnonymousSeptember 4, 2009 at 6:56 PMma Endre Kyaw Zin do you forget actor Dwe? Do you miss Dwe?or do you see new loveafamous name is ........i know who he is.ReplyDeleteAnonymousSeptember 19, 2009 at 11:50 AMမင်္ဂလာပါကိုနေတိုး သရုပ်ဆောင်တာတွေအရမ်းကောင်းတယ်။ကိုနေတိုးဒီထပ်မက အောင်မြင်မှုသရဖူ များစွာရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်။ကိုနေတိုး ကို အစဉ်အမြဲ အားပေးနေပါတယ်။ReplyDeleteAnonymousFebruary 1, 2010 at 5:56 PMအူဝဲကိုတော့ အရမ်းကြိုက်တာ။ဘယ်ဇာတ်ကားကို ကြည့်ကြည့် အ၀တ်အစားကအစ သရုပ်ဆောင်အဆုံး သေသေသပ်သပ်ရှိတယ်။ ကြည့်တဲ့ ပရိသတ်တွေကို တန်အောင်လုပ်ပြနိုင်တယ်။ သဘောကျတယ်။အားပေးဆဲပါ အူဝဲရေ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် အပျိုကြီးတော့ မလုပ်နဲ့ ကြင်နာပေးနိုင်မဲ့သူ မြန်မြန်သာရှာယူပေတော့နော်။ReplyDeleteAnonymousMarch 21, 2010 at 11:18 AMi think nay toe and eaindra kyaw zin should marry.ReplyDeleteAnonymousJune 29, 2010 at 4:00 PMhi is goodReplyDeletemzOctober 17, 2010 at 11:37 PMnay toe and eain dra kyaw zin are the most perfect one.I am also ra kine.You two should marry.Ko Nay Toe,what about you?Are you like Ma Eian Dra Kyaw Zin?What about Ma Eian Dra Kyaw Zin?Are you like Ko Nay Toe?I only watch you two movies.That will be good,if you two marry.You two are the most beautiful and haveawonderful styleYou two are the best actor and actressI have so many Nay Toe and Eain Dra Kyaw Zin photos.Only you two photos.ReplyDeletepowerJuly 11, 2011 at 7:57 AMI HOPE YOU DON'T LOSE COURAGE; EAIN DAR KYAW ZINReplyDeleteAdd commentLoad more...